Wana Mari Pamhepo - TMC App
Gamuchira Mari PaIndaneti
Iyo Definitive Overview yekuita mari iwe uri painternet.
Vanopfuura mamirioni makumi mana vekuAmerica vane nhimbe yepadivi kana imwe nzira yekuita mari yakawedzerwa. Kune dzakawanda sarudzo kubva pakuita kushambadzira kushambadzira kuburikidza nekubhuroga kugadzira zvinhu zveEtsy kudonhedza zvigadzirwa zvekutumira neShopify. Izvi zvese zvinoda huwandu hwakakwana hwenguva yekusara kana yekutanga capital. NeSwagbucks, unogona kuita mari yakawedzerwa kuburikidza nefoni yako panguva yako yekuzorora. Dzivirira kubatwa muCraigslist rip-off kana piramidhi chirongwa kana uchitsvaga mutsva wepadivi hustle. Hapana chinodiwa chekushandisa kune yakasarudzika webinar kana pa-line yekudzidzira kosi kuti uwane maitiro ekuita izvi.
Swagbucks ndeyekurumbidza uye zvakare yakayerwa zvakanyanya mabhenefiti emagetsi pamwe nenzvimbo yekudzosera mari iyo inobhadharwa kunze kwemadhora mazana matanhatu nemakumi matanhatu emamiriyoni emadhora kune vashandisi vayo. Swagbucks inoshandisa akasiyana emabasa kuti vanhu vayo vawane mari online. Chaunongoda ndeyemhando yepamusoro yekubatanidza net.
Unogona kuwana mari yekutora online ongororo?
Pakati peimwe yeanonyanya kufarirwa uye akajairika nzira vanhu vanogona kuita mari online kuburikidza neiyo Swagbucks online kudzidza chirongwa.
Brands uye bhizinesi rekutsvagisa rekushambadzira rinogamuchira vashandisi veSwagbucks kuzadza-pamhepo ongororo nezve zvigadzirwa nemasevhisi. Kana vanhu vapedza chidzidzo, Swagbucks inobhadhara vashandisi vayo pakati pemadhora 0.05 uye zvakare $2.50 (uyezve dzimwe nguva ingangosvika madhora makumi maviri neshanu - $25).
Ndezvipi zvidzidzo zvinobhadhara mari?
Zvidzidzo zveongororo zvinosanganisira izvo zvine chekuita nekushambadza uye kushambadzira uye zvakare inofamba mifananidzo yetirailer inoshanda; kukosha kweakawanda chigadzirwa kana masevhisi maitiro; huwandu hwezvinhu muunganidzwa we eCommerce; pamwe chete, pamwe inonyanya kufarirwa, pamba chigadzirwa bvunzo dzekuedzwa kwevatengi.
Zvakakosha kuyeuka kuti vanhu havaiti "certificate" yezvidzidzo zvese. Vatsvagiri vemusika vanowanzoda maonero kubva kune vatengi vanofananidzira huwandu hwevanhu kana vari mumusika kune mamwe masevhisi uye zvigadzirwa. Kana iwe ukayedza ongororo yaunozotadza kuwana, Swagbucks inokupa iwe chero chinhu chimwe chete muchirongwa chayo chekukurudzira. Iwe unonzwisisa zvavanotaura: "Sendi repfungwa dzako".
Chaizvoizvo ndingaite sei mari yakawanda kutora paongororo yeinternet?
Mushure mekunge wanyatsoona email yako; mushure mekunge wanyatso pfuura neyako social media feeds; kana iwe wakanyatso tarisa ako ese Snapchat ngano uye wakatarisa kuburikidza ne Twitter yako, zadza kuzorora kwako uye uwane mari yakabhadharwa painternet ongororo.
Kuti utange kuwana mari nezvidzidzo zvepamhepo, saina-up neSwagbucks, simbisa email kero yako uye zadzisa chimiro chako. Neyedu-nyowani nharembozha app, unogona kupedzisa mizhinji yezvidzidzo kubva kune yako smart kifaa.
Gara nazvo. Kubhadharirwa kutora zvidzidzo kunotora nguva asi nesimba, iwe uchaona mari ichiungana.
Iwe unoita sei mari nekuyedza masevhisi uye zvigadzirwa?
Nyanzvi dzekushambadzira uye mazita emhando anobhadhara vashandisi veSwagbucks kuti vaedze chigadzirwa kana masevhisi kuti vawane mhinduro dzakananga. Muzviitiko zvakawanda, huwandu hwemari inobhadharwa nevatengesi vepamhepo inovhara chikamu chemutengo webasa kana chigadzirwa pachayo. Zvakadaro, kune mamwe mamiriro ezvinhu apo bhizinesi rinotsiva vanhu vane mari inodarika mutengo wesevhisi sekuvhara gore rekutanga rekuve nhengo. Aya ndiwo mamiriro ezvinhu nemasevhisi enhengo apo vatengesi vanoshuvira kukwezva vatengi muyedzo yekutanga yemhinduro yavo netariro yekuti vatengi vacharamba vakanyoreswa mushure menguva yebvunzo.
Ndeapi akanyanya kunaka maSwagbucks madhiri?
Heano kutenderera-kwemamwe eanonyanya kushanda mabargain emasevhisi anoshamisa uko iwe unogona chaizvo kuwana mari nekungozviedza kunze.
Hulu: Edza vhidhiyo yevhidhiyo yekutepfenyura mhinduro ye $5.99 chete yemwedzi mumwe uye zvakare tora imwe mari kudzoserwa pane mutengo wekuyedzwa. Nakirwa neNyaya yeHandmaid. Kana uchichida, chengeta Hulu. Kana zvimwe, hapana chinosungirwa.
Dollar Shave Club: Tarisa mareza anoyevedza neawo ekutanga muunganidzwa nemadhora mashanu chete. Tora ndebvu rakachena uye zvakare kupfapfaidza kukuru kwemari yemari inozopfuura kubhadhara mutengo webvunzo yako.
Bluehost: kana wanga uchifunga nezvekugadzira webhusaiti, ino ndiyo nguva! Shandisa Bluehost kubata yako saiti. Vane kubata zvinopihwa zvinotanga pamadhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemashanu / mos. Uye, kana iwe ukashandisa Swagbucks kusaina-up, iwe unowana yakaringana mari yekudzoserwa kune yakawanda kupfuura kubhadhara mutengo wegore rako rose rekuronga.
Iko kune nguva dzose mitsva yekuedza zvinhu zvinotenderera kuburikidza neSwagbucks. Zvimwe ndizvo zvaungafunga nezve "vanoita mari" sevakapihwa pamusoro; mamwe angori mijenya pamasevhisi uye zvigadzirwa zvaungada kuedza. Ongorora saiti yewebhu zuva nezuva kuti uwane "mari yemahara" inopihwa uye kumwewo kumwe kuchengetedza kwemari kwakanaka. Kunyangwe ukasaita mari yakawanda, inzira inonakidza yekutarisa chinhu chitsva.
Unogona kuita mari online nekuona mavhidhiyo pamwe nekuongorora zvirimo?
Izvo hazvione mavhidhiyo epamhepo? Saka, iwe unogona zvakare kugadzira mari inonakidza mavhidhiyo! Swagbucks ine nzvimbo yewebhusaiti yayo uye zvakare akati wandei nharembozha dzakatsaurirwa kuzadzisa vanhu kuti vaone vhidhiyo clip yekutamba uye kuongorora zvirimo mumawebhusaiti akasiyana.
Kana iwe wakazvipira, unogona kugara uchigadzira nezve $5 zuva nezuva uchiona mavhidhiyo paSwagbucks. Kune akasiyana siyana anonakidza emhando dzevhidhiyo. Iwo anosanganisira Kumba kwevaraidzo, Chikafu, Imba & Yadhi, Hutano, Tekinoroji, uye Kufamba.
Saka, kana iwe uchifunga kuunza mari uchiona inotonhorera mavhidhiyo, tarisa iyo Swagbucks Watch chiteshi. Dhawunirodha Uye Isa iyo Swagbucks Tarisa nharembozha kuti uwane mari iwe uchiona mavhidhiyo paunenge uchienda!
Mawebhusaiti ekutsvaga eInternet seGoogle neBing anoburitsa mari kubva mukumhanyisa ads kubva mukutsvaga kwavo. Kana iwe ukachinja tsvaga yako yewebhu bhurawuza kuita Swagbucks unogona kuwedzera mari kubva kumabasa emazuva ese sekubhurawuza internet. Tine mari dzevanounganidza dzakavanzwa pamhepo.
Vamwe vari kuverenga:AppleunlockTmc appAppleunlockerVolte sip meseji sms kubata uye kuteereraSpymaster proMaitiro ekuona chiitiko pane yako routerNu votNyika dzaunogona kushanyiraGhostctrl downloadGhostctrl apk